OOP in C++ : အပိုင်း (၅) - Data types and Variables (၃) - Open Engineering For Myanmar
Home » articles » C and C++ » ဘလူးဖီးနစ်
» OOP in C++ : အပိုင်း (၅) - Data types and Variables (၃)
OOP in C++ : အပိုင်း (၅) - Data types and Variables (၃)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီသင်ခန်းစာများကို စတင်ရေးသားစဉ်ကပင် လေ့လာသူများကို reference အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရေးသားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အပတ်စဉ် ဖတ်ရှုအားပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ယခင် သင်ခန်းစာများမှာ int နဲ့ char ဆိုတဲ့ type နှစ်မျိုးအကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ type နှစ်ခု စလုံးက ဒဿမ မပါတဲ့ integer ဂဏန်းတွေနဲ့ ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။ ဒီအပတ်မှာတော့ floating-point variable များအကြောင်းကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Floating Point Types
Floating-point variable တွေဟာ ဒဿမ ပါတဲ့ ဂဏန်းတွေကို ကိုယ်စားပြု သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - 3.1415927, 0.0000625, 10.2 စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ အားလုံးမှာ decimal point (.) ရဲ့ ဘယ်ဘက်က integer part တွေ ဖြစ်ကြပြီး၊ ညာဘက်ကတော့ fractional part တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ floating-point variable တွေဟာ သင်္ချာ ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ အကွာအဝေး၊ ဧရိယာ၊ အပူချိန် စတာတွေကို တိုင်းတာဖို့ သုံးတဲ့ real numbers တွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အဲဒီ တိုင်းတာမှုတွေမှာ များသောအားဖြင့် အပိုင်းကိန်း အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါနေလေ့ ရှိပါတယ်။ C++ မှာတော့ float, double နဲ့ long double ဆိုပြီး floating-point variable သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။ Type float
ပုံ-၅.၁ ကွန်ပျူတာ မှတ်ဥာဏ်၌ float type variable တစ်ခု နေရာယူခြင်း
float ကတော့ အဲဒီ floating-point variable သုံးမျိုးထဲမှာ အငယ်ဆုံး ဖြစ်ပြီး 3.4×10-38 ကနေ 3.4×1038 ကြားထဲမှာ ဂဏန်း ခုနှစ်လုံး precision ရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါ ဥပမာလေးကတော့ floating-point number တွေကိုသုံးပြီး စက်ဝိုင်း တစ်ခုရဲ့ ဧရိယာကို ရှာတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးပါ။ // circarea.cpp
#include <iostream> //for
#include <conio.h> //for
float rad; //variable of type float
PI = 3.14159F; //type const float
cout << "Enter radius of
circle: "; //prompt
cin >> rad; //get radius
float area = PI * rad * rad; //find area
cout << "Area is "
<< area << endl; //display answer
ပုံ-၅.၂ circarea.cpp နှင့် testing
Tpye double and long double
ပိုပြီး အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ floating point types တွေဖြစ်တဲ့ double နဲ့ long double တွေဟာ ကွန်ပျူတာ မှတ်ဥာဏ်မှာ နေရာပိုယူပြီး တန်ဖိုးတွေ ပိုထည့်သွင်းနိုင်သလို ပိုမိုတိကျလာတာက လွဲလို့ float နဲ့ အတူတူပါပဲ။ double type အနေနဲ့ သိမ်းဆည်းဖို့ 8 bytes လိုအပ်ပြီး 1.7×10-308 ကနေ 1.7×10308 ကြား ကိန်းဂဏန်းတွေကို သိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပြီး ဒဿမ ၁၅ နေရာအထိ တိကျပါတယ်။ long double type ကတော့ ကွန်ပိုင်းလာ အပေါ် မူတည်နေပေမယ့် များသောအားဖြင့် double နဲ့ တူလေ့ ရှိပါတယ်။ ပုံ-၅.၃ ကွန်ပျူတာ မှတ်ဥာဏ်၌ double type variable တစ်ခု နေရာယူခြင်း
circarea.cpp ပရိုဂရမ်လေးမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ 3.14159F ဆိုတဲ့ ဂဏန်းလေးဟာ floating-point constant လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ decimal point ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ integer type မဟုတ်မှန်း သိနိုင်သလို နောက်ဆုံးက F ကတော့ float type ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ double အတွက်ကတော့ နောက်ဆုံးမှာ ဘာ suffix letter မှ ထည့်ပေးလိုက်စရာ မလိုဘဲ သာမာန် ဒဿမကိန်း ပုံစံ ရေးပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ double က defaulut type ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ long double အတွက်ကတော့ L ကို ထည့်ပေးဖို့ လိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ floating-point constants တွေကို exponential notation ကိုသုံးပြီး ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ သုညတွေ အများကြီး သုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဥပမာ 1,000,000,000 ကို 1.0E9 လို့ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ 1234.56 ကိုလည်း 1.23456E3 လို့ ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ 109 ကို E9 နဲ့ 103 ကို E3 လို့ အလွယ်တကူ ရေးနိုင်ပါတယ်။ E နောက်မှာ ရေးတဲ့ ဂဏန်းကို ထပ်ညွှန်း exponent လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ exponent ကို ကြည့်ပြီး ဒဿမနောက် ဘယ်နေရာ ရွှေ့ပေးရမယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ exponet တွေက positive နဲ့ negative တန်ဖိုး နှစ်ခုစလုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 6.35239E-5 ဆိုတာဟာ 0.0000635239 ကို ဖော်ပြတာပါ။ The const Qualifier
circarea.cpp ပရိုဂရမ်ထဲမှာ float အပြင် const ဆိုတဲ့ စကားလုံး ပါလာပါတယ်။
const float PI = 3014159F; //type const float
constant အတွက်သုံးတဲ့ const ဆိုတဲ့ သော့ချက် စကားလုံးကို variable တွေကြေငြာတဲ့ data type တွေရဲ့ ရှေ့မှာ ရေးရပါတယ်။ အဲဒီ variable ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုလုံးမှာ ပြောင်းလဲလို့ မရတော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ အဲဒီ တန်ဖိုးကို ပရိုဂရမ်ထဲမှာ ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့မယ် ဆိုရင် error message ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ const qualifier လေးဟာ ကျွန်တော်တို့ ပုံသေ သတ်မှတ်ထားချင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုကို မတော်တဆ ပြောင်းလဲမိခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ သုံးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုဒ် ကို ဖတ်မိတဲ့ လူတိုင်းကိုလဲ ဒီတန်ဖိုးဟာ ပြောင်းလဲလို့ မရဘူးဆိုတာ သတိပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ The #define Directive
C++ မှာ သိပ်မသုံးကြတော့တဲ့ ပုံစံ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ constants တွေကို #define ဆိုတဲ့ preprocessor directive နဲ့ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ identifier တွေနဲ့ ညီမျှ text phrase တွေကို ဖန်တီးပေးမှာပါ။ ဥပမာ - #define PI 3.14159 ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို ပရိုဂရမ်ရဲ့ အစမှာ ရေးသားခြင်းဖြင့် PI ဆိုတဲ့ စာသားကို 3.14159 ဖြင့် အစားထိုး ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရေးသားနည်းကို C language မှာ အတော်လေး ခေတ်စားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ် data type ဆိုတာကို မသတ်မှတ်နိုင်တဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် အမှားအယွင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် C++ နဲ့ C# မှာ const ကို သုံးပြီး ရေးသားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပရိုဂရမ် အဟောင်းတွေကို ဖတ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ #define တွေ အများကြီး တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
int data type မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ တန်ဖိုးတွေ ဘီလီယံနဲ့ ချီပြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ char မှာတော့ ၂၅၆ လုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ bool ကတော့ true နဲ့ false ဆိုပြီး နှစ်မျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သီအိုရီအရ bool ဟာ one bit ပဲ နေရာယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ bit အနေနဲ့ သိမ်းခဲ့ရင် byte ကနေ ပြန်ပြီး ခွဲထုတ်ယူရတာ ဖြစ်လို့ အချိန်ပိုကြာတာကြောင့် ကွန်ပိုင်လာက ကိုင်တွယ်ရယူဖို့ မြန်ဆန်တဲ့ byte အနေနဲ့ ပဲ သိမ်းဆည်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ် စစ်ဆေးချက်တွေရဲ့ ရလာဒ်တွေကို သိမ်းဆည်းဖို့ bool type ကို အသုံးများပါတယ်။ ဥပမာ ကိုကို ဟာ မောင်မောင်ထက် အသက်ကြီးလား ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက် မှာ မှန်ခဲ့ရင် bool value - true ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး မှားခဲ့ပါက false ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ bool ဆိုတဲ့ နာမည်ကို true-or-false တန်ဖိုးတွေ နဲ့ logical operators တွေကို သုံးပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ ၁၉ ရာစု အင်္ဂလိပ် သင်္ချာပညာရှင် George Boole အား အစွဲပြုပြီး ဂုဏ်ပြုခေါ်ဆိုကြတာပါ။ The setw Manipulator
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ endl အကြောင်းကို ရေးသားစဉ်က အချက်အလက်တွေကို screen မှာ ပြသတဲ့အခါ insertion operator (<<) နဲ့ တွဲသုံးတဲ့ manipulator ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခု သင်ခန်းစာမှာတော့ output ရဲ့ field width ကို ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်တဲ့ setw manipulator အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ cout ကို သုံးပြီး တန်ဖိုး တစ်ခုကို screen မှာ ပြသမယ်ဆိုရင် အဲဒီတန်ဖိုးဟာ တိကျတဲ့ width ရှိတဲ့ မမြင်ရတဲ့ လေးထောင့် နေရာတစ်ခုကို ယူထားတယ်လို့ စိတ်ကူး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ default field ကတော့ အဲဒီ တန်ဖိုး ဆန့်သလောက် နေရာယူထားတာပါ။ ဥပမာ- integer 567 ဟာ အက္ခရာ သုံးလုံးစာ နေရာယူမှာ ဖြစ်ပြီး "pajamas" ဆိုတဲ့ string ကတော့ ခုနှစ်နေရာ ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့ နေရာတွေမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ပေးဖို့ လိုလာပါတယ်။ နမူနာ အနေနဲ့ width1.cpp ပရိုဂရမ်လေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ဒီပရိုဂရမ်လေးမှာ မြို့သုံးခုရဲ့ အမည်ကို ကော်လံ တစ်ခုမှာ ပြသထားပြီး အခြားကော်လံမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ လူဦးရေများကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
need for setw manipulator
long pop1=2425785, pop2=47,
cout << "LOCATION "
<< "POP." << endl
ပုံ-၅.၄ width1.cpp နှင့် testing
ကျွန်တော်တို့ သတိထားမိတဲ့အတိုင်း output မှာပါတဲ့ လူဦးရေ အရေအတွက် တွေဟာ နှိုင်းယှဉ်ရ ခက်ခဲနေပါတယ်။ တကယ်လို့ ညာဘက်ကို ညှိထားမယ် ဆိုရင် ဖတ်ရ ပိုမို လွယ်ကူလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နာမည်တွေ ဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်း နောက်က ဂဏန်းတွေကြားမှာ နေရာလွတ် (spaces) တွေ ခြားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေလာမှာပါ။ အထက်က width1.cpp ကိုပဲ အနည်းငယ် ပြင်ဆင်ပြီး with2.cpp နာမည်နဲ့ setw manipulator အသုံးပြုကာ ပြန်ရေးပါမယ်။
#include <iomanip> // for
cout << setw(8) << "LOCATION"
<< "Portcity" <<
setw(12) << pop1 << endl
<< "Hightown" <<
setw(12) << pop2 << endl
<< "Lowville" <<
setw(12) << pop3 << endl;
ပုံ-၅.၅ width2.cpp နှင့် testing
setw manipulator က သူ့နောက်က ဂဏန်းတွေနဲ့ စာသားတွေကို n character အကျယ်ရှိတဲ့ field အတွင်းမှာ ဖော်ပြပေးပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ n ဆိုတာက setw(n) functin ကွင်းထဲက argument (n) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တန်ဖိုးက field ထဲမှာ right-justified ဖြစ်နေမှာပါ။ အထက်က ပုံ-၅.၅ မှာ output မှာ မြင်ရမယ့် ပုံကို ပြထားပါတယ်။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ လူဦးရေတွေကို ဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာ 2-byte နေရာယူပြီး အများဆုံး တန်ဖိုး 32767 ပဲ သိမ်းလို့ရတဲ့ အတွက် overflow ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ integer type တွေကို မသုံးဘဲ long ကို သုံးထားတာပါ။
ပုံ-၅.၆ width2.cpp နှင့် testing
Cascading the Insertion Operator width1.cpp နဲ့ width2.cpp မှာ ပါရှိတဲ့ cout statement ထဲမှာ cout ကို တစ်ခါပဲ သုံးထားပြီး စာကြောင်းရေ အတော်များများ ရေးထားတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ကွန်ပိုင်လာ က whitespace တွေကို ထည့်မစဉ်းစားတာနဲ့ insertion operator (<<) တွေကို cascade လုပ်ပြီး ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရေးလို့ရတဲ့ အချက်တွေကို အသုံးချထားတာ ဖြစ်တယ်။ cout လေးကြောင်းရေးပြီး ရလာမယ့် ရလာဒ်နဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
variables တွေဖြစ်တဲ့ pop1, pop2 နဲ့ pop3 တို့ကို ဖန်တီးစဉ် တန်ဖိုးတွေပါ တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဒီနည်းနဲ့ data type တူညီတဲ့ variables တွေကို ကော်မာ ခံပြီး ဖန်တီးပေးခြင်း၊ တန်ဖိုး သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကုဒ်များကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။
The IOMANIP Header File
endl, setw() စတဲ့ manipulators တွေကို အသုံးပြုဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ iostream header file ထဲမှာ မပါတဲ့ အတွက် iomanip header file ကို ထပ်မံ ကြေငြာပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ width2.cpp မှာ #include // for setw ဆိုပြီး ရေးသားသွားတာပါ။
နောက်အပတ်တွေမှာတော့ data type တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ဘယ်လို ပြောင်းလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ ဤ ဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်များကို စမ်းသပ်ရာမှာ အခက်အခဲ ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် စာရေးသူရဲ့ တင်ပြပုံ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သိလိုသည်များကိုလည်း aungwh2013@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းနိုင်သလို ပြင်ဦးလွင်သားများ အတွက်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာရှိ တော်ဝင် ကွန်ပျူတာ စင်တာ ၌လည်း လေ့လာ စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကိုးအကား
Object-Oriented Programming in C++(4th edition), Robert Lafore, Copyright©2002 by Sams Publishing: ISBN 0-672-32308-7 Dr. အောင်ဝင်းထွဋ် (bluephoenix) တော်ဝင် ကွန်ပျူတာ စင်တာ